Abụ Ọma 36 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ịhụnanya Chineke enweghị atụ
Onye ajọ omume anaghị atụ egwu Chineke (1)
Ọ bụ Chineke na-enye ndụ (9)
“Ọ bụ ìhè gị na-enye anyị ìhè” (9)
Maka onye na-eduzi abụ. Abụ Devid ohu Jehova. 36 Ọ bụ ihe ọjọọ na-achị obi onye ajọ omume. Ọ naghị atụ egwu Chineke.+ 2 N’ihi na onwe ya na-ebu ya isiNke na ọ naghị achọpụta ihe ọjọọ ọ na-eme, ọ kpọghịkwa ya asị.+ 3 Ihe ọ na-ekwu n’ọnụ ya na-agbawa obi, na-eduhiekwa mmadụ. Ọ maghịzi otú e si eme ihe ọma. 4 Ọ na-anọdị n’elu àkwà* ya akpa nkata ọjọọ. Ọ na-eso ụzọ na-adịghị mma. Ọ naghị ajụ ihe ọjọọ. 5 Jehova, ịhụnanya gị* na-eru n’eluigwe.+ Ihe ọma ị na-eme na-eru n’ígwé ojii. 6 Ezi omume gị dị ka nnukwu ugwu.*+ Ihe ndị ị na-ekpebi karịrị akarị. Ha dị omimi ka ogbu mmiri.+ Jehova, ị na-echebe* mmadụ na anụmanụ.+ 7 Chineke, ịhụnanya gị* enweghị atụ.+ Ọ bụ n’okpuru nku gị ka ndị mmadụ na-agbaba ka e chebe ha.+ 8 Ha na-eri ihe ọma* ndị juru n’ụlọ gị, rijuo afọ.+ Ị na-emekwa ka ha rie ihe ọma ndị na-asọ ka mmiri.+ 9 Ọ bụ gị na-enye ndụ.+ Ọ bụ ìhè gị na-enye anyị ìhè.+ 10 Biko, akwụsịla ịhụ ndị ma gị n’anya,+Na-egosikwa ndị obi ha dị ọcha na ị bụ onye ezi omume.+ 11 Ekwela ka ndị dị mpako zọọ m ụkwụ,Ekwekwala ka ndị ajọ omume kwapụ m. 12 Lee, ndị na-eme ihe ọjọọ adaala. A kụtuola ha, ha enweghịkwa ike ibili.+
^ Na Hibru, “ugwu Chineke.”
^ Ma ọ bụ “na-azọpụta.”
^ Na Hibru, “abụba.”